Izikhokelo ze-Semalt Indlela yokukhusela iifowuni zeewebhusayithi kunye neDarodar Bots
Abanikazi bewebhu abaninzi baye baqaphela i-darodar.com kunye neenkcukacha ze-buttons-for-website.com ezibonisa kwiingxelo ze-Google Analytics - maximum retention insurance. Ziba njengabathumeli bezothumela inani elininzi lezithuthi. Abenzi okubi nakwiziko, kodwa inani lokutyelela abaya kulo kwiwebhusayithi lichaphazela amazinga omonakalo kunye nexesha elichithwe kwiphepha. Isiphumo kukuba i-algorithm yokukhangela yeGoogle iya kuyiphatha njengempikiswano esemgangathweni kwaye abantu abayifumani into abayifunayo kwisayithi. Ngenxa yoko, banciphisa izinga lokukhangela lewebhu. Kungabonakali kuninzi kwimibutho emikhulu, kodwa kwishishini elincinci lesayizi kunye newebhusayithi, inokwenza okanye iphule imisebenzi yayo.
UAlexandro Peresunko, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , ubonisa apha iindlela ezithandekayo zokunqoba le ngxaki.
Bobabini abakhonkco baqhagamshela kwisayithi ebonakala ngathi ivumelekile. I-Darodar ibonakala inika uhlalutyo lwendawo kubasebenzisi, ngelixa amaqhosha-kwi-website anika amabhizinisi ithuba lokuba babelane nge-URL kwizinto ezifana ne-AddThis. Yilapho ukugqithiswa kokusemthethweni kubonakala kugqitywa nangona ivela kwimithombo ethile ibonakalise injongo efanelekileyo yezi ziza ezimbini. UDarodar uye waba ngaphaya kwamaqhosha-kwi-website, kwaye udale "i-botnet." I-botnet yintanethi yeekhompyutha ezinokusuleleka kwintsholongwane eneenjongo zokunciphisa ukhuseleko lwekhompyutha. Inika abahlaseli ngobunzima bokufuna ukufumana ukungena kwakhona kwinkqubo. Lowo olawula i-botnet ulawula imisebenzi yale manethiwekhi.
I-botnet iquka iinkulungwane zee-adresi ze-IP ezenza kube nzima ukuvimba umququzeleli ngempumelelo nge-IP Ukungabikho kwi-Analytics. Amanqaku amaninzi athetha ukuba i-bot iyaqhubeka ichaphazela iiwebhsayithi ngokusebenzisa enye okanye ezininzi iinkqubo ezinegciwane lesandulela ngculaza. I-Soundfrost yinto enye efunwayo yokukhuphela iifayili ene-virus.
Ukusebenzisa iirobhothi..indlela ye-txt yokuvimba amabhinqa-kwi-website kunye ne-darodar, njengokuba kwakuya kubakho abanye abakhwela / izibungulu, akuyi kuba ngempumelelo kuba izikhokelo zithembele ekuthobeleni ngokuzithandela. Ukuba umninimzi uqhuba izicwangciso zeNew Hat, imisebenzi yabo ayihambisani nezikhokelo.
I-botar ye-darodar ineendlela ezininzi. Omnye wabo kukunyusa i-SEO yesiza ngokuvuselela ngokuhambisa isithuthi kwindawo. Uqwalaselo lwalo lusetyenziswa ngendlela engabonakali njengomkhweli. Ubonakala ngathi ungumveleli wangempela kwaye injini yokukhangela iya kubandakanya kwiingxelo zabo, ngaloo ndlela iholele ekudakaleni kwidatha ye-Analytics. Oku kwaziwa ngokuba yi-link spamming, into eyenzileyo ngenxa yokubuyekezwa kwe-algorithm yakutshanje.
I-Wikipedia ichaza i-spam ye-referer njengendlela yo-spamdexing equka izicelo eziphindaphindiweyo usebenzisa i-URL yokubamba i-fake kwisayithi apho u-spammer unqwenela ukupapasha. Iziza ke zidibanise ngokukhawuleza kwisayithi ye-spammer erekhodiweyo njengezithuthi. Kunenzuzo kugaxekile njengoko izixhumanisi zamahhala zinceda ukwakha izikhundla zabo zokukhangela.
Ezinye iindidi ezisebenzisayo ziyi-attack-of-service attack, qhafaza ubuqhetseba, u-spamdexing, ubusela okanye ulwazi lomntu siqu kunye nezemali, i-mail ye-SMTP idlulisela i-spam, kunye ne-bitcoins yezimayini. Ngokusekwe kwezi ziphumo, bekungekho nto enqwenelekayo ukuba neendlela ezinjalo kwiwebhusayithi.
Iifowuni zeWebhsayithi zinemisebenzi efanayo, kuphela ukuba ukuhanjiswa kwayo kuhlukile. Inika ithuluzi lokuhlanganyela ngokukhawuleza kwiwebhusayithi. Umzuzwana umninimzi uyifakela, ludala isango abantu abangayisebenzisa ukugubha isiphequluli sewebhu seendwendwe kwiziko labo.
Iifowuni zokuVimba kwiWebhu neDarodar
Ukhetho lokubamba amaqhosha-kwi-website kunye ne-darodar ngokusebenzisa ukukhutshwa kwe-IP ukukhusela i-traffic kuyo ayiyi kuba yimpumelelo. Isizathu kukuba bobabini banamakheli amaninzi IP ukuqhuba isitratti kwisayithi. Enye indlela ukuhlela ifayile ye -htaccess nganye yale mimandla kunye nokuvimba isithuthi ukusuka apho. Ukwenza oku, umntu makangene kwi-directory yomthombo kwi-host host yewebhu eyenza indawo ye-WordPress. Qinisekisa ukusebenzisa i-Apache inkqubo apho abaninzi abaninikelayo bamashishini basebenzisa. Ukuba umntu akanakho amava ekutshintsheni iifayile ze -htaccess, cela umphathi webhsayithi ukuba ancede kuyo kuba nayiphi na impazamo encinane inokukhokelela ekuphazamiseni indawo yonke.